Madaxweynaha: “Furista waddooyinkan cusub ee Muqdisho waxay tilmaan u tahay in’’+Sawirro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay waddooyinka Danwadaagta iyo Sayidka, kuwaas oo dhowaan ay dib u dhiseen maamulka gobolka Banaadir oo ka duulaya barnaamijka dalkaaga dhiso.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dhismaha waddooyinkan ay tilmaan u tahay sida shacabka uga go;an tahay inay waddankooda wax u qabtaan, intii karaankoodana ay ku hirgeliyan mashaariic horumarineed.
Waxaa uu Madaxweynaha sheegay in waddooyinkan burburkii ka muuqday iyo maanta sida laga dhigay ay muujinayso in shacabku tashadey, ayna doonayaan inay qurxiyaan xaafadahooda.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku ammaanay maamulka gobolka Banaadir sida uu uga soo dhalaaley kaalintiisa ku aaddan dib u dhiska waddanka iyo weliba doorka ay ka qaadanayaan sugidda amniga caasimadda.
Madaxweynaha waxaa furitaanka waddooyinkan ku wehliyey xubno ka tirsan labada gole, Guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna Duqa magaalada Muqdisho, Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale iyo mas’uuliyiin kale.